Ny anjara toeran’i Masina Maria sy ny vehivavy ao amin’ny Fiangonana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mananjara ilay Reny masin’Andriamanitra, mitaha amin’ireo vehivavy maro be. Natokan’ny Fiangonana Katolika hanajana azy manokana ny volana mey. Volan’i Masina Maria no iantsoantsika izany, volana tokony homena lanja, handinihana bebe kokoa ny anjara toeran’ny vehivavy ao amin’ny Fiangonana sy fiarahamonina ary ny tantaram-pamonjena. Rariny io raha zohina, satria ny volana Jiona no natao ho an’ny ankizy sy ny tenin-dreny, sady volan’ny Fo Masin’i Jesoa.
Mitana ny toerana manokana eo amin’ny tantaram-pamonjena i Masina Maria. Miavaka izy amin’ny samy vehivavy, eo amin’ny tantaran’ny olombelona. Notsongain’ny Tompo ho Renin’ny Zanany Lahitokana izy. Tsy noho ny fahamendrehany manokana, na dia eo aza izany, fa noho ny fitiavany sy ny famindram-pony, ka nofidiny maimaim-poana tao anatin’ny maro. Tsapan’i Maria lalina tokoa izany ka nahatonga azy niloa-bava, velon-kira, nankalaza ny Tompo, tamin’ilay tonon-kira malaza “Magnificat”, fiventintsika matetika, indrindra amin’ny Vavaka hariva ataon’ny Fiangonana.
Nietry tena sy nanaiky hiaritra ny mafy toy ny fahafaham-baraka i Masina Maria, raha niangavan’ny Tompo, tamin’ny alalan’ny Anjely Gabriely, izay iraka nanambara taminy fa hanana anaka izy na dia nivoady ho virjiny aza. Mahagaga sady lalina ny asan’Andriamanitra, ho an’izay fatra-panaiky sy mpankatò ny teniny.
Manana ny anjara toerany manokana i Maria eo anivon’ny Fiangonana, efa hatrany am-piandohana. Tsy isalasalana fa nanatrika ny nanorenana ny Eokaristia tao amin’ny Senakla izy (Lk 22,19-20); raha tsy izany dia mazava fa, isan’ireo mpianatra niara-nivavaka (Asa 1,12-14) sy tafavory, nandray ny Fanahy Masina tamin’ny andro Pantekoty izy (Asa 2,1-4). Reny tsy nahafoy Zanaka i Maria, sady tsy nandao Azy ka niaritra ny mafy, nijery Ilay nolefonina (Jn 19,31-37). Saingy novan’Andriamanitra ho haravoana ny alahelony. Tsy ihambahambana fa izy no voalohany nisehoan’i Jesoa tafatsangan-ko velona (Fampiasam-panahy 299).
Tanan’ny Fiangonana hatrany ny lova navelan’ny Tompo momba izany
Mitana andraikitra maro ao amin’ny Fiangonana ny vehivavy, ary be ny asa vitany ho fanitarana ny Fanjakan’Andriamanitra. Vavolombelon’ny mpiasa ny bainga: ka toa ireo Reliozy vavy matetika no mitana, mamelona ireo sekoly kristianina. Hatramin’ny sekoly tantanan-dry Frera sy Mompera avy aza no mbola ahitana vehivavy mpanabe.
Toa an’i Masina Maria, nikolokolo sy nitaiza an’i Jesoa, no iahian’izy ireo koa ny zanaky ny Fiangonana, mianatra sy miezaka, manovo fahalalana sy fahendrena etsy sy eroa. Be ny asa vitan’ny vehivavy kristianina eo amin’ny sehatra maro samihafa, ho fanasoavana ny besinimaro. Ezahin’ny Fiangonana katolika hazavaina hatrany io tena andraikitry ny vehivavy ao amin’ny Fiangonana io. Tsy azo raisina an-tendrony na hanina amam-bolony ny Soratra Masina, fa natao hiainana, ijoroana ho vavolombelona.
Tsy nifidy na dia vehivavy iray akory i Jesoa, na nanendry azy ho isan’ny Apositoly 12 lahy (Lk 9,1-6) na ireo Mpianatra 72 lahy (Lk 10,1-12). Saingy ireo vehivavy kosa no nanakinany mivantana sy voalohany ny hafatra maharavo fo, hilaza amin’ireo mpianany fa efa nitsangan-ko velona Izy, ka hialoha azy ireo any Galilea (Mt 28,9-10).
Isan’ny iraka ho an’ny vehivavy ny miahy sy mikolokolo ny zanaky ny Fiangonana, mijoro ho vavolombelon’ny Tompo be fitiavana sy mana-paharetana ary mangoraka. Manan-danja izany, saingy tsy azo afangaro amin’ny Sakiramentan’ny Filaharana izay ifandovana manokana sy natao hanohy ary hisahana ny asan’ireo Apositoly sy ny 72 lahy. Iraka mifandray tendro tanteraka amin’ny asa fiahiana sy fanompoana, ka nisian’ireo Virijiny sy Diakra vehivavy na “diaconesses”, fahiny elabe, fony mbola tsy nisy ireo Fikambanana Masera sy Relijiozy vavy.